ምሳሌ 10 NASV – Mmebusɛm 10 AKCB | Biblica
ምሳሌ 10 NASV – Mmebusɛm 10 AKCB
Ɔba nyansafo ma nʼagya ani gye,
na ɔba kwasea brɛ ne na awerɛhow.
2Ɔkwan bɔne so ahonya nni bo,
nanso trenee gye onipa fi owu mu.
3Awurade remma ɔkɔm nne ɔtreneeni
na omumɔyɛfo de, ɔka nʼadepa gu.
4Nsa a ɛnyɛ adwuma ma onipa di hia,
nanso nsiyɛfo nsa de ahonya ba.
5Nea ɔboaboa nnɔbae ano wɔ ahuhurubere no yɛ ɔba nyansafo
na nea ɔda wɔ twabere mu no yɛ ɔba nimguaseni.
6Atreneefo hyɛ nhyira kyɛw
na akakabensɛm ayɛ omumɔyɛfo anom ma.
7Ɔtreneeni nkae yɛ nhyira,
na omumɔyɛfo din bɛporɔw.
8Koma mu nyansafo tie ɔhyɛ nsɛm,
na ɔkwasea kasafo hwe ase.
9Ɔnokwafo nantew dwoodwoo,
na nea ɔfa akwan kɔntɔnkye so no ho bɛda adi.
10Nea ɔde nitan bu nʼani no de ɔhaw ba,
11Ɔtreneeni anom yɛ nkwa asuti,
12Ɔtan kanyan mpaapaemu,
nanso ɔdɔ kata mfomso nyinaa so.
13Wohu nyansa wɔ nhumufo anom,
na abaa fata nea onni adwene akyi.
14Anyansafo kora nimdeɛ,
nanso ɔkwasea ano frɛfrɛ ɔsɛe.
15Adefo ahonya yɛ wɔn kuropɔn a wɔabɔ ho ban,
nanso ahiafo hia yɛ wɔn asehwe.
16Atreneefo akatua de nkwa brɛ wɔn,
na nea amumɔyɛfo nya no de asotwe brɛ wɔn.
17Nea otie ntetew pa no kyerɛ nkwa kwan,
na nea ɔpo nteɛso no di afoforo anim yera kwan.
18Nea ɔkata nitan so no yɛ ɔtorofo,
na nea odi nseku no yɛ ɔkwasea.
19Mfomso mpa ɔkasa bebree mu,
na nea ɔkora ne tɛkrɛma no yɛ onyansafo.
20Ɔtreneeni tɛkrɛma yɛ dwetɛ ankasa
nanso omumɔyɛfo koma nni bo.
21Atreneefo ano ma bebree aduan,
na atemmu a nkwaseafo nni nti wowuwu.
22Awurade nhyira de ahonya ba,
na ɔmfa ɔbrɛ mmata ne nya ho.
23Bɔneyɛ yɛ anigyede ma ɔkwasea,
nanso nea ɔwɔ nimdeɛ anigye wɔ nyansa mu.
24Nea amumɔyɛfo suro no bɛba wɔn so;
na nea atreneefo pɛ no, wɔde bɛma wɔn.
25Sɛ ahum no betwa mu a, amumɔyɛfo yera,
nanso atreneefo gyina hɔ pintinn afebɔɔ.
26Sɛnea nsa keka ɛse, na wusiw kɔ aniwa no,
saa ara na ɔkwadwofo yɛ ma wɔn a wɔsoma no.
27Awurade suro ma nkwa tenten,
nanso wotwa amumɔyɛfo nkwa so.
28Atreneefo anidaso de ahotɔ ba,
nanso amumɔyɛfo anidaso nkosi hwee.
29Awurade kwan yɛ guankɔbea ma ɔtreneeni,
nanso ɛyɛ ɔsɛe ma wɔn a wɔyɛ bɔne.
30Wɔrentɔre atreneefo ase da,
nanso amumɔyɛfo renka asase no so.
31Nyansa fi ɔtreneeni anom ba
nanso tɛkrɛma a ɛdaadaa no, wobetwa akyene.
32Ɔtreneeni ano nim ade a ɛfata
na omumɔyɛfo ano nim nea ɛyɛ nnaadaasɛm nko ara.
AKCB : Mmebusɛm 10